Alaeze Chineke​—Gịnị Mere I Ji Kwesị Ịma Gbasara Ya?
ỤLỌ NCHE ỌKTOBA 2014
Ọtụtụ nde mmadụ nọ n’ebe dị iche iche n’ụwa nwere olileanya na Alaeze Chineke ga-eme ka ihe ka mma n’ọdịnihu. Ha na-ekpe ekpere Jizọs kụziiri ndị na-eso ụzọ ya ka ha na-ekpe. Ekpere ahụ bụ: “Ka alaeze gị bịa, ka e mee uche gị n’ụwa.”—Matiu 6:10, Baịbụl Nsọ nke International Bible Society.
N’agbanyeghị na e nwere ndị chọsiri ike ka Alaeze Chineke bịa, o yiri ka ọtụtụ okpukpe enweghị ihe ha ji Alaeze ahụ kpọrọ. Otu ọkọ akụkọ ihe mere eme aha ya bụ H. G. Wells kwuru na mgbe Jizọs ‘na-akụzi ihe n’ụwa, ọ na-ekwukarị gbasara ihe ọ kpọrọ Alaeze Eluigwe,’ ma Wells sịrị na ‘ọtụtụ chọọchị anaghị ekwucha gbasara Alaeze ahụ ma ha kụziwe ihe.’
Ndịàmà Jehova anaghị eme ka chọọchị ndị ahụ n’ihi na ha na-ekwukarị gbasara Alaeze Chineke. Ha na-ebipụta akwụkwọ a ị na-agụ ugbu a, bụ́ Ụlọ Nche, na narị asụsụ abụọ na iri abụọ. A na-ebipụta Ụlọ Nche nke ọ bụla ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ nde iri anọ na isii. Ọ bụ ya mere o ji bụrụ akwụkwọ a kacha ekesa n’ụwa niile. Oleekwanụ isi ihe akwụkwọ a na-ekwu? Ị ga-amata azịza ajụjụ a ma i lee anya n’ihu ya bụ́ ebe e deruru aha ya n’isi, ya bụ, Ụlọ Nche nke Na-ekwusa Alaeze Jehova. *
Gịnị mere anyịnwa bụ́ Ndịàmà Jehova ji agbasi mbọ ike ka anyị kwusaa Alaeze Chineke ma ọ bụ mee ka ndị mmadụ mara gbasara ya? Otu ihe kpatara ya bụ na anyị kweere na ọ bụ Alaeze Chineke bụ isi ihe e kwuru na Baịbụl, bụ́ akwụkwọ kacha mkpa e nwere n’ụwa. Nke ọzọ bụ na o doro anyị anya na ọ bụ naanị Alaeze Chineke ga-eme ka nsogbu niile ndị mmadụ nwere kwụsị.
Ndịàmà Jehova na-akọrọ ndị mmadụ gbasara Alaeze Chineke. Ọ bụkwa ihe Jizọs mere mgbe ọ nọ n’ụwa. N’eziokwu, ọ bụ Alaeze Chineke bụ okwu Jizọs kpụ n’ọnụ mgbe ọ na-ekwusa ozi ọma, ọ bụkwa ya bụ ihe kacha mkpa ná ndụ ya. (Luk 4:43) Gịnị mere Jizọs ji jiri Alaeze Chineke kpọrọ ihe? Olee uru Alaeze ahụ ga-abara gị? Anyị na-agba gị ume ka ị gụọ isiokwu ndị na-eso nke a ka ị hụ otú Baịbụl si zaa ajụjụ ndị a.
mailto:?body=Gịnị Mere I Ji Kwesị Ịma Gbasara Alaeze Chineke?%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fdocid%3D2014722%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=Gịnị Mere I Ji Kwesị Ịma Gbasara Alaeze Chineke?
ỌKTOBA 2014 Olee Uru Alaeze Chineke Ga-abara Gị?
mailto:?body=ỌKTOBA 2014 Olee Uru Alaeze Chineke Ga-abara Gị?%0a%0ahttps%3A%2F%2Fwww.jw.org%2Ffinder%3Fpub%3Dw14%26issue%3D20141001%26wtlocale%3DIB%26srcid=share⊂ject=ỌKTOBA 2014 Olee Uru Alaeze Chineke Ga-abara Gị?